Ravensburger: Mazita mashanu e2022 Toy Mubairo - Spielpunkt - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 7, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau
Mubairo weGerman Toy Prize wepagore wakasarudza matoyi matsva, ane hunyanzvi uye anokosha pakudzidzisa. Gore rino kune huwandu hwezvigadzirwa makumi mana nemana muzvikamu zvishanu pazita revakadomwa. Ravensburger ari pakati pavo ane zvishanu zvitsva - uye nekudaro ane mukana wekugamuchira mubairo une mukurumbira kakawanda.
Mubairo weToy weGerman wakatangwa nemagazini "Mhuri & Co" wakapihwa gore negore kwemakore makumi maviri - zvakare gore rino. Vatengi vane revo mune izvi. Muna 20, zvigadzirwa makumi mana nemana kubva muzvikamu zvishanu zviri pazita rekudomwa, Ravensburger akakwanisa kupinda kashanu. Muparidzi akapa muhwina wese gore rapfuura: Lotti Karotti. Mutambo uyu zvakare wakahwina chikamu "Zvese zvemoyo yevana" muna 2022.
Ravensburger: Gravitrax - Mutambo wakasarudzwa zvakare
Mazita mashanu eRavensburger ari parunyorwa rwekudomwa:
Mapikicha eJigsaw anonakidza. vana zvakadaro. Iine itsva "Puzzle&Play" yakatevedzana kubva kuRavensburger, kunakidzwa kunotanga chaizvo mushure mekunge mapuzzle apera. Nekuti vana kubva pazera reXNUMX vanoishandisa kuvhiringa yavo yekutamba mamiriro, mavanogona kutamba vakasununguka uye nekugadzira. Iine manhamba uye zvinhu zviri mupakiti, unogona kuenda parwendo rwekushanya pamasitepisi maviri paseti, semuenzaniso musango, pakuvhima pfuma nemakororo kana panhare ye knight ine shato yekushanya.
Puzzle&Tamba (Jungle Adventure, Safari Time, Land in Sight, Pirate Treasure Hunt, Royale Party, Kingdom of Donuts), yevana kubva pamakore gumi nematanhatu,
imwe neimwe (RRP) 14,99 euros, ET Kurume 2022
Famba wakachenjera! Felix Wackelnix
Mutambo wakangwara wechiito une zai rinodedera unodzidzisa muviri nepfungwa panguva imwe chete. Sloth mascot inokurudzira mhuri dzine vana kubva pazera remakore mashanu kuita mabasa anonakidza ekufambisa uye kuvagadza mabasa ekuziva. Vatambi vanotambanudza kana kutambanudza uye kuenzanisa zai, se "Felix-Fauli" anoratidza pamakadhi. Asi chimwe chechinetso chemitambo kufunga nezvemhuka shanu dzakasvibira kana mitambo mitatu yebhora. Pretty tricky. Vamwe vatambi vanopururudza kusvika yave nguva yavo yekudzidzira kuziva muviri, kuenzanisa uye kuisa pfungwa. Ravensburger akagadzira mutambo uyu mukubatana nechirongwa cheFelix Neureuther Foundation "Beweg dich schlau!" chirongwa chekukurudzira vana kuti vawedzere maekisesaizi muhupenyu hwemazuva ese.
Felix Wackelnix, zvevana kubva pamakore gumi nematanhatu, 2 - 6 vatambi, (RRP) 33,99 euros,
ET Gunyana 2022
Ndiani anokwanisa kubvarura mudzvanyiriri wake neshuffle yakakwana? Chinhu chimwe chinogona kuziviswa pachine nguva: avo chete vanoshandisa maitiro akakodzera ndivo vanokunda. Neiyo itsva BRIO Shuffleshot, zano uye hunyanzvi zvinofambidzana. Izvo hazvina basa kuti barricade ine mupikisi akaiswa zvakanaka discs yakanangwa pakutanga kana iyo yakakwira mamakisi yakanangwa zvakananga: chinangwa ndechekuwana iyo yepamusoro nhamba yemapoinzi nekuita kuti vatambi vaswedere pedyo sezvinobvira kune dzvuku doti mukati. pakati pebhodhi remutambo. Kana zvibodzwa zvese zvapfurwa, mutambo unoenda kuround rinotevera. Mapoinzi anonyoreswa uchishandisa masiraidhi padivi pemutambo wetafura. Mutambi anonwisa mapoinzi gumi anotanga ahwina mutambo. Kuti pasave nemadhisiki akarasika, anogona kuiswa nyore mukati mebhodhi.
BRIO shuffleshot, zvevana kubva pamakore gumi nematanhatu, 1 - 4 vatambi, (RRP) 59,99 euros,
ET Kubvumbi 2022
GraviTrax MUTAMBO ipuzzle uye kuvaka kunakidza zvese nezve Ravensburger marble run system. Pfungwa nyowani yemutambo kune wese anoda "kufunga kunze kwebhokisi" kugadzirisa mapikisi anonyepa. Iyo mitsva yakateedzana yemitambo ine logic inokoka vana, vechidiki uye vese marble track mafani kuti vaedze uye kuyedza zvinhu nemakadhi ebasa uye zvinhu kubva kuGraviTrax universe. Iyo Brainteasers inogona kuridzwa pasina chero GraviTrax Starter Set kana GraviTrax "Equipment". Ruzivo rwekare rwekuvaka harudiwe zvakare. Kuvaka mapuzzle ekuoma kwakasiyana kwakamirira vatambi. Izvi zvinotsanangura izvo GraviTrax zvinhu kubva mumutambo zvinofanirwa kuiswa kuitira kugadzira mapfupi emarble anomhanya. Izvi zvinogona kuva zvakaoma zvikuru! Kana bhora rikakunguruka kubva pakutanga kusvika pakupera, mutambi anenge agona dambudziko. Mutambo uye puzzle inonakidza kumba uye pakuenda. Ndega, neshamwari kana mhuri yese!
GraviTrax Mutambo (IMPACT, FLOW, COURSE), yevana kubva pamakore gumi nematanhatu,
imwe neimwe (RRP) 26,99 euros, ET Kurume 2022
Mune ino yemubatanidzwa labyrinth vhezheni, munhu wese anotamba pamwechete achipesana naDaedulus, mweya welabyrinth. Kutenderedza nekutenderera, vatambi vanopenengura mubhuku raDaedalus kuti vadzidze zvipingamupinyi zvaanoisa munzira yavo. Unogona here kushandisa mashiripiti ako zvakanaka, uchitsvedza madziro uye nekutsvaga hupfumi hwese hwakavanzika peji rekupedzisira rebhuku risati ravhurwa? Nekuti ndiyo yega nzira yavanogona kukunda nayo. Nekuda kwekugara kutsva kwemutambo chimiro, kunakidzwa hakuna magumo.
Labyrinth Team Edition, zvevana kubva pamakore gumi nematanhatu, (RRP) 34,99 euros,
Ravensburger GraviTrax Iyo Game Flow - logic mutambo wemarble run... * 15,84 EUR tenga
Kare Zombie Mauto 4: MuDLC "Hondo Yakafa" yakananga kumagumo enyika
Inotevera Epic Mitambo Chitoro: Yese Mitsva Yemahara Mitambo
Everdell Zombies: Ropa Edition inonzi "inorema psycho rwendo".
Mitambo Yakavanzika: Pegasus inotora kugoverwa kwemutambo wehutsotsi
Asmodee yave kuda kudzoka: kuronga neSpielwarenmesse
Vamwe vapfuri veNintendo Shandura: Overwatch uye Doom 64 vanoonekwa